DOWNLOAD DRIVERS MAKA CANON MF4730 - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Usoro ọkwọ ụgbọala maka Canon MF4730
Dịka na usoro ịkwụ ụgwọ ọ bụla, e nwere ọrụ na njedebe na Yandex Ego. N'isiokwu a, anyị ga-ekwurịta banyere mgbochi na ego ole usoro na-ewe maka ọrụ ya.
Ụlọ ọrụ na Yandex Ego
A na-akwụ ọtụtụ n'ime ịkwụ ụgwọ a na-eme na Yandex Ego n'enweghị ọrụ. Ya mere, ị nwere ike ịzụ ahịa, kwụọ ụgwọ ọrụ na ụtụ isi n'ego ha. Ọrụ Yandex na-ekpuchi ọnọdụ ụfọdụ.
1. Ijere obere akpa ego nke na-ejibeghị ihe karịrị afọ 2 ga-efu gị 270 rubles kwa ọnwa. A ga-akwụ ụgwọ ahụ site na akaụntụ ahụ. Otu ọnwa tupu afọ iri abụọ agafee na ịkwụ ụgwọ ikpeazụ, usoro ahụ ga-eziga leta na ịdọ aka ná ntị. Enwere ike ịkwụ ụgwọ ụgwọ ọnwa a maka ọnwa 3. Site na iji obere akpa na Yandex Ego na-akwụ ụgwọ.
2. Ịmecha obere akpa site na iji kaadị akụ na Yandex Ego menu nyere ọrụ nke 1% nke nkwụghachi ụgwọ. N'otu oge ahụ, ọ bụrụ na ị mejupụta akaụntụ gị na ATM nke Sberbank, Bank MTS, Golden Crown na ụfọdụ ụlọ akụ ndị ọzọ, ọrụ a ga-abụ 0%. Anyị na-enye gị anya ndepụta nke ATM nke na-enye nbaghachi na enweghị ọrụ. Ọzọkwa, ị nwere ike ịzụta n'efu site n'enyemaka nke akụ na ụzụ Ịntanetị Sberbank Online, Alfa-Click na Raffaisen Bank.
Hụkwa: Otu esi etinye ego gị na Yandex Ego
3. Mgbe ị na-emeziwanye ego na ngwụcha nke Sberbank, Euroset na Svyaznoy, enweghị ọrụ. Isi ihe ndị ọzọ nwere ike ịmepụta ọrụ na nghọta ha. Ndepụta nke ikuku na ọrụ efu.
4. Nweghachi nke akaụntụ mobile nke Beeline, MegaFon na MTS ga-eru 3 rubles, n'agbanyeghị ego ole. Agaghị ebubo ọrụ ahụ ma ọ bụrụ na i megharia nchịkọta akaụntụ azụmaaka.
5. Ịkwụ ụgwọ nke ụgwọ akwụkwọ na-arụ ọrụ na 2%. Ịkwụ ụgwọ nke ndị uweojii na-ahụ maka ndị uwe ojii - 1%.
6. Ịkwụsị ego site na Yandex Money plastic card na ịkwụ ụgwọ nke mgbazinye ego na-enye maka ọrụ nke 3% nke ego + 15 rubles.
7. Commission maka ịnyefe ego na Yandex Wallet - 0.5%, si obere akpa kaadị - 3% + 45 rubles, nyefee WebMoney - 4.5% (dịnụ iji mata ndị ọrụ)
Ego oke na Yandex Ego
Ụkpụrụ nke ịdebe na usoro Yandex Ego dabeere na ọnọdụ nke obere akpa. Ndị isi obodo nwere ike ịbụ aha aha, ahaziri onwe ha ma mata. Ogo nke ọnọdụ na, ya mere, njedebe dabere na nkọwa zuru ezu gbasara onwe gị ịnyela usoro ahụ.
N'ihe nkowa: Nyocha Yandex obere akpa
1. N'agbanyeghi ọkwa, ị nwere ike mejupụta obere akpa gị site na kaadị akụ, jiri ATM, nkwụsị, usoro nkwụnye ego maka ihe karịrị 15,000 rubles n'otu oge (100,000 rubles kwa ụbọchị, 200,000 kwa ọnwa)
2. Ịkwụ ụgwọ ịkwụsị na-adabere na ọkwa ego:
Anonymous - ihe karịrị 15,000 na oge akwụ ụgwọ site na obere akpa. Mgbe ị na-akwụ ụgwọ site na kaadị - ọ bụghị ihe karịrị 20,000 kwa ụbọchị (ruo 15 ụgwọ), ruo 1,000,000 kwa ọnwa;
Personal - ruo 60,000 n'oge na-akwụ ụgwọ na obere akpa. Mgbe ị na-akwụ ụgwọ site na kaadị - ọ bụghị ihe karịrị 20,000 kwa ụbọchị (ruo 15 ụgwọ), ruo 1,000,000 kwa ọnwa;
Achọpụtara - ruo 250,000 n'oge akwụ ụgwọ site na obere akpa. Mgbe ị na-akwụ ụgwọ site na kaadị - ọ bụghị ihe karịrị 40,000 kwa ụbọchị (ruo 15 ụgwọ), ruo 1,000,000 kwa ọnwa.
3. Nkwụsị maka ịkwụ ụgwọ maka nkwurịta okwu mkpanaka:
Aha na onwe - 5 000 na oge;
Mata - 15,000.
4. Nkwụsị na ịnata - ihe ruru 15,000 rubles site na akpa ọ bụla site na azụmahịa. Ruo 100,000 kwa ọnwa.
5. Iwu na ndị uweojii na-ahụ maka ndị uwe ojii - 15,000 site na ọrụ, ruo 100,000 kwa ọnwa na ruo 300,000 kwa afọ.
6. Ụgwọ nke mgbazinye ego na-enye ọnụọgụ na otu nkwụnye ego n'ego 15,000 maka ndị ọrụ niile. Mgbe ị na-akwụ ụgwọ site na Anonymous na Personal, njedebe kwa ụbọchị bụ 300 000 rubles. Maka ama - 500 000.
7. Ezigbo nfefe na obere akpa:
site na Personal - 60,000 maka mbufe, ruo 200,000 kwa ọnwa;
na ama - 250,000 site na mbufe, ruo 600,000 kwa ọnwa.
Hụkwa: Otu esi eji ọrụ Yandex Ego